China B Series Nchekwa onwe-ahu itinye n'ọnọdụ aka bench na Manufacturer na Supplier | MIT
Nrụgide oru Platform ebuli
L Series Auto-ahụ itinye n'ọnọdụ bench
B Series Auto-body itinye n'ọnọdụ bench
Ihe atụ Cabled
Independent centralized akara usoro: otu ahụ nwere ike welie na ala n'elu ikpo okwu, sere towerRing ekara haịdrọlik ụlọ elu hụ na 360 Celsius bugharia. Vilikal cylinders na-enye ike na-adọta na-enweghị akụrụngwa ike. Workingdị elu dị iche iche na-arụ ọrụ (375 ~ 1020mm) kwesịrị ekwesị maka ndị ọrụ dị iche iche.
* Independent centralized akara usoro: otu ahụ nwere ike welie na ala n'elu ikpo okwu, sere towerRing ekara haịdrọlik ụlọ elu hụ na 360 Celsius bugharia. Vilikal cylinders na-enye ike na-adọta na-enweghị akụrụngwa ike. Workingdị elu dị iche iche na-arụ ọrụ (375 ~ 1020mm) kwesịrị ekwesị maka ndị ọrụ dị iche iche. na nke abụọ na-ebuli. Ọ na-adị mfe ịrụ ọrụ na oru oma.
* Platform nwere ike ibuli elu na ala vetikal na tiltable eweli, nke ana achi achi di iche iche nke mberede ugbo ala ga-esi na-apụ n'elu ikpo okwu na-enweghị lifter. Workingdị elu dị iche iche na-arụ ọrụ (375 ~ 1020mm) kwesịrị ekwesị maka ndị ọrụ dị iche iche.
* Akwadoro ya na ihe kacha mma T-top clamps nke ụwa, idozi ma na-edozi ugbo ala ngwa ngwa ma sie ike. Ọtụtụ usoro nlele bụ nhọrọ.
* ￠ 12 anwụ na-adịgide adịgide iji hụ na ike dị elu na nchekwa.
* Mo-mwekota Anam Udeme ngwaọrụ, dị ka site USA, bụ nhọrọ, nke na-ịgbanwe ụdị ọ bụla nke itinye n'ọnọdụ.
* Kpamkpam-nchọ centralized-akara usoro ana achi achi ike ike, ala ọdịda ọnụego.
* Kwụsie ụkwụ wheel akpali elu. Stiffener n'ime na-ebugharị ihe na-eme ka ọ sie ike ma dịgide.
* Mgbakwunye ọzọ n'ime ikpo okwu na-eme ka ogologo oge dịgide. Usoro mmụgharị eletriki dị iche iche dakọtara, na-eme ka ikpo okwu dịkwuo irè.
* Ibughari doo enwekwu ọrụ ohere.
Obosara nke nyiwe
Max. Ike Ike (ụlọ elu)
Ike mgbapụta eletrik
Nkwakọ ngwaahịa & ationgbọ njem
Nke gara aga: MAXIMA Dent Puller ịgbado ọkụ Machine B3000
Osote: M Serires Nchekwa onwe-ahụ itinye n'ọnọdụ bench
M Serires Nchekwa onwe-ahụ itinye n'ọnọdụ bench
M1000 Series Auto-ahu itinye n'ọnọdụ bench